आजबाट ज्योति विकास बैंकको डेढ अर्बको ऋणपत्रमा आवेदन दिन सकिने, कति पाइन्छ व्याज? – online arthik
आजबाट ज्योति विकास बैंकको डेढ अर्बको ऋणपत्रमा आवेदन दिन सकिने, कति पाइन्छ व्याज?
आइतबार, आषाढ २०, २०७८ | ११:५३:१७ |
ज्योति विकास बैंक लिमिटेडले असार २० गतेदेखि १ अर्ब ५० लाख रुपैयाँ बराबरको ‘ज्योति विकास बैंक बण्ड २०८७’ नामक ऋणपत्र निष्काशन तथा बिक्री खुल्ला गरेकोछ । बैंकले प्रतिइकाई १ हजार रुपैयाँको दरमा १५ लाख कित्ता ऋणपत्र बिक्री खुल्ला गरेको हो ।
बैंकले बिक्रीमा ल्याएको ‘ज्योति विकास बैंक बण्ड २०८७’ १० वर्ष अवधिको उक्त ऋणपत्रमा लगानीकर्ताले छिटोमा असार २३ गतेसम्म र ढिलोमा साउन ३ गतेसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । ऋणपत्रमा नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट सी–आस्वा सदस्य प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्था र मेरो शेयर सफ्टवेयर मार्फत आवेदन दिन सकिन्छ । उक्त ऋणपत्रमा न्यूनतम २५ इकाईदेखि अधिकतम ३० हजार कित्तासम्म आवेदन दिन सकिने व्यवस्था छ ।
बैंकले जारी गर्न लागेको उक्त ऋणपत्रलाई इक्रा नेपालले ‘इक्रा एनपी आईआर रेटिङ बीबी प्लस’ रेटिङ दिएको छ । उक्त रेटिङ पाउने कम्पनी मध्यम कर्जा जोखिम र वित्तीय दायित्व पूरा गर्ने सम्बन्धमा मध्यम जोखिम रहेको मानिन्छन् ।
उक्त ऋणपत्रको बिक्री प्रबन्धक एनआईबिएल एस क्यापिटल लिमिटेडले रहेको छ।